kuwaas oo nooc kasta ah naafada ah waxaad xaq u leedahay in ay gargaar shakhsiyeed.
Maxia Care Ab waa shirkad yar oo tayo leh oo bulshada ka hor yimaado wax
Waxaanu bixinaa kaalmo jacayl, tayada, iyo tixgelin, iyo
Waxaan taageeri macaamiisheena ay kuwa kale la siin.
Waxaan nahay shirkad yar oo gaar loo leeyahay, taas oo ay jirto qolka aad u.
Waxaad ma idlaan doonaan dadkii badnaa, aad haysato meel gaar ah.
Helitaanka saacad - hotline.
Hanuun Legal mar walba waa lacag la'aan nala.
Waxaan qorshaynaynaa dalxiisyada, koorsooyinka iyo waxqabadyada kale.
Waxaan leenahay heshiisyada shaqada, mushahar fiican iyo xaaladaha kaalmo our.
Waxaan nahay khubaro gargaarka ilmaha la aragti ah ee ilmaha galay diirada.
Warbixin ku siiyo macaamiisha, xubnaha qoyska iyo caawiyeyaasha socda.
By joogta ah updated oo ku saabsan lacagta aad imaanshaha, warbixinta joogto ah, taageero iyo talo doono
aad fursad u leeyihiin in ay saamayn aad gargaar iyo lug iyo go'aan sida aad u rabto in la abuuro qorshe fulineed ee aad gargaarka.
Sida loo naga macmiilka noqday
Macluumaadka shirka; shir nala waa talaabada ugu horeysa. Marka laga haddii aad iga aqbasho ama diido dalabkeena, waxaad had iyo jeer waa lagu soo dhaweynayaa in ay na soo booqato oo aad u hesho xog cusub oo ku saabsan adeegyada sida bixiyeyaasha gargaar.
Kulanka Hordhaca; shirka xiga halkaas oo aad ku fikiraysay inaad wax badan oo hadda doonaya in ay sii qoto dheer oo ku saabsan macluumaadka iyo ururka. Intii lagu guda jiray shirka, waxaad heli doontaa macluumaad afka ah oo labada skritflig ku saabsan cidda aynu nahay iyo sida aan u shaqeeyo. Waxaan ka hadlaan sharciyada iyo sharciyada in aan leenahay hadda socota. Waxaad ka heli warbixin loo baahan yahay si aad u KUNA akhri nabad iyo shanqar la'aan intii aannu dalbaa shirka xiga marka aan u saxiixi doono heshiiska.
Easter guushii weyneyd ee heshiiska; Intii lagu guda jiray shirka, labadeennaba saxiixi doono heshiiska oo ay suurtagal tahay. oggolaansho noo inuu ku soo bilowdo ka shaqeeya sida bixiyeyaasha aad gargaar rasmi ah. Haddii aad qabto heshiis la taageero bixiyayaasha kale iyo baahida loo qabo in la taageero joojinta heshiiska labaad aad kuu caawin kara arrintan.
Hordhac; Todobaad kadib markii aad saxiixday heshiiska gudahood, aad iyo tiirsan aad mari habka induction si aan loo hubiyo in dhammaan isgaarsiinta ee hawlgalka mustaqbalka siman. Inta lagu guda jiro introdutionen waxaad heli doontaa Hababkayagu ku xeeran gargaarka, iyo sidoo kale waxaad ka heli taariikhda dhamaystirka qorshaha fulinta.
Hambalyo! Hadda, ka dib markii aad samaysay oo dhan, waxa aanu si diiran kugu soo dhaweeyo macmiilka nala! Rajaynaynaa in aad dareento sida qayb ka mid ah shaqadayada.
Your xaq himiladeenna
Ma doonaysaa in ay noqdaan macaamiisha, ha ka cabsan oo na soo wac maanta!
Sida aan mar walba isku dubbaridi gargaar ka wakiil ah codsiyada gargaarka by isticmaala, waa in nooca waxyaabaha aad u hesho wax badan oo saamayn weyn sida gargaar ah waxaa la siiyaa dhammaan saamaynta ay delar.Du:
Ka qaybqaadashada firfircoon ee design ee fulinta gargaar (Qorshaha Hirgelinta) ah.
Noqo awoodaan in ay doortaan cida aad la shaqeeya kaalmo shakhsi ah (shaqaalaynta).
Saameyn jadwalka, goorta iyo sida gargaarka laga fulin doonaa (kormeerka).
Caqliga lch ee oo ay awoodaan in ay saameyn ku isticmaalka faa'iidooyinka gargaarka (daba-).
Saamayn ku caawiyeyaasha ka mid ahaa hawlaha qaarkood, sida si kaaliyeyaasha qaar ka mid noqon badan ama ka yar ku haboon loo eego kuwa kale waqtiyo kala duwan ay aragti isticmaala.
Waxaad ka heli awood u leeyahay inuu saamayn iyo madaxbannaani in howlgalka marxaladaha oo dhan.